မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေပြီးတောင်းပန်ကြတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ရှေးဟောင်းဓလေ့ - JAPO Japanese News
သော 27 Dec 2019, 13:23 ညနေ
ဂျပန်လူမျိုးတွေက ချက်ချင်းဆိုသလို “တောင်းပန်ပါတယ်” လို့ပြောတဲ့ ယဥ်ကျေးမှုကရှိပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ ဒါဟာအရမ်းကို တောင်းပန်လွန်းအားကြီးတယ်လို့မြင်နေပေမဲ့၊ မိမိရဲ့အမှားကိုလက်ခံပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရိုးသားစွာနဲ့တောင်းပန်ကြတာကို အလေးထားကြတဲ့ ယဥ်ကျေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်အတွက်ကတော့ ကြီးကြီးမားမားဒုက္ခပေးမိသလိုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အခြေအနေမှာတော့ ဘယ်လိုတောင်းပန်ကြလဲဆိုတာ သိကြပါသလား……?
အဲ့ဒီလို မိမိရဲ့ ၀မ်းဗိုက်ဘယ်ဘက်ကနေ ဓါးကိုထိုးသွင်းပြီး ညာဘက်အထိဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှ အပေါ်ကိုပြန်ဆွဲတင်တဲ့ သတ်သေခြင်းမျိုးဖြင့် တောင်းပန်မှုကိုပြကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဓလေ့နဲ့မရင်းနှီးတဲ့ တိုင်းတစ်ပါးသားတွေအတွက်ကတော့ အရမ်းကိုမိုက်ရူးရဲဆန်တဲ့ တောင်းပန်ခြင်းမျိုးပဲလို့ မြင်ရပေမယ့်၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေကတော့ ရဲရင့်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့ ကြီးကြီးမားမားတန်ဖိုးထား လက်ခံကျင့်သုံးကြပါတယ်။
သေချာတာကတော့၊ ယနေ့ခေတ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေလောက်တဲ့အထိ တောင်းပန်မှုမျိုး မလုပ်တော့တဲ့အတွက် နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကြမ်းပြင်မှာထိုင်ချလိုက်ပြီး၊ ခေါင်းကိုကြမ်းပြင်နဲ့ ထိတဲ့အထိ တောင်းပန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို 土下座 dogeza လို့ခေါ်ပါတယ်။ မူလက ဒါကိုတောင်းပန်တဲ့ပုံစံတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ၊ အရမ်းကိုယဥ်ကျေးတဲ့ အရိုအသေပေးခြင်းအဖြစ်လက်ခံ ကျင့်သုံးပြီး၊ ၀န်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပေမဲ့၊ အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရောက်လာချိန်မှာတော့ အဆင့်အမြင့်ဆုံးတောင်းပန်ခြင်းပုံစံအဖြစ် အစားထိုးလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာလည်းပဲ အလွန်အမင်းတောင်းပန်တဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ကတော့ တောင်းပန်မယ့်တစ်ဖက်လူအပေါ်လိုက်ပြီး၊ ရိုးသားစွာနဲ့တောင်းပန်တဲ့စကားကို ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ မိမိရဲ့ရိုးသားမှုကိုပြဖို့ အနည်းငယ်ဈေးကြီးတဲ့မုန့်ကို ယူသွားတာမျိုးကလည်း ယေဘုယျနည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လှပတဲ့ဗူးလေးထဲမှာထည့်ထားတဲ့မုန့်၊ ဒါမှမဟုတ် သစ်သီး box စတာတွေကလည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးနည်းပြီး၊ ပစ္စည်းအရည်အသွေးမကောင်းရင်တော့ တော်တော်လေးကို အဆင်မပြေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တောင်းပန်မှုကိုပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံမှန်ကိုယ်၀ယ်နေကျမဟုတ်တဲ့ ဈေးကြီးပြီး တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကို ပြဖို့က အရေးအကြီးဆုံးသိထားရမယ့် အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအချိန် အသုံးပြုနိုင်တာကတော့ ဒီလိုမုန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကတော့切腹最中（せっぷく　もなか）seppuku monaka လို့ခေါ်ပါတယ်။
最中（もなか）monaka ဆိုတာကဖောင်းဖောင်းပွပွ မုန့်သားရဲ့ကြားမှာ အချိုအရသာပဲအနှစ်လေးတွေကို ညှပ်ထားတဲ့ မုန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်မုန့်တွေကတော့အထဲကအနှစ်တွေကိုမမြင်ရပေမဲ့၊ ဒီ seppuku monaka မုန့်ကတော့ ဖုံးလို့မရလောက်အောင် ပဲနှစ်တွေကိုထည့်ထားပြီးတော့၊ ပဲနှစ်တွေက ထွက်ကျလာတဲ့ပုံကိုမြင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမုန့်က 切腹seppuku လုပ်ခြင်းနဲ့ ပုံစံတူတာကြောင့် seppuku monaka မုန့်လို့နာမည်ပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရသာကို အဓိကရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့အရသာကြောင့်ပဲ လူကြိုက်များပြီး ဆိုင်ရဲ့သက်တမ်းကလည်း နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ခဲ့ပါပြီ။
ဆိုင်ကတော့ တိုကျိုရဲ့ ရှင်းဘရှိ မှာရှိပါတယ်။ ရှင်းဘရှိမှာ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ရုံးခန်းတွေအများစုဖွင့်ကြတဲ့အတွက် customer company တွေကိုတောင်းပန်ဖို့သွာတဲ့အခါ ဒီမုန့်လေးကို၀ယ်ပြီးပေးကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပိုပြီးလူသိများတဲ့မုန့် ဖြစ်လာပါတယ်။
နာမည်နဲ့မလိုက်အောင် အရသာကအရမ်းကောင်းနေတဲ့အတွက် လက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိသူဘက်ကလည်း အနည်းငယ်ပျော်ရွှင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းလမ်းကတော့ တောင်းပန်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးဗျူဟာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနာမည်ကို အတည်ပြုမပေးခင်မှာ မုန့်ထုတ်လုပ်သူက customers တွေကို “ဒီမုန့်ရဲ့နာမည်ကို ဘယ်လိုထင်လဲ” လို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ဖြေသူ ၁၁၉ ယောက်ထဲမှာ လူပေါင်း ၁၁၈ ယောက်က NO လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
မုန့်က အရသာရှိပေမယ့် နာမည်ကတော့ နိမိတ်မကောင်းဘူး၊ အနည်းငယ် ဟာသဆန်နေတယ် ဆိုပြီးဖြေကြားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမေးမြန်းခြင်းရဲ့ ရလဒ်နဲ့အတူ မိသားစုကလည်း ဒီနာမည်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ပေမယ့်၊ သူကတော့ ၂ နှစ်တိတိ မိသားစုကို နားချခဲ့ပါတယ်။
စတင်ရောင်းချတဲ့အချိန်မှာတော့ နားမလည်နိုင်အောင် လူသိအရမ်းများလာခဲ့ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမုန့်ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားကတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်တောင်းပန်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သေချာပေါက်အလုပ်ဖြစ်မယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။
ဂျပန်လူမျိုးတွေက ရိုးသားမှုကို တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
မှားသွားပြီလိုထင်ရင် ချက်ချင်းဆိုသလို တောင်းပန်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာရိုးသားမှုကို ဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
တတ်နိုင်သမျှ တစ်ဖက်လူရဲ့ မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး တောင်းပန်ကြပါတယ်။ ဖုန်းဆက်ခြင်း၊ email ဖြင့်စာပို့ခြင်းကိုတော့ လုံး၀မလုပ်ကြပါဘူး။
သင်ဟာ seppuku လုပ်ရတဲ့အထိမတတ်နိုင်ရင်၊ သေသေချာချာနဲ့ ရိုးရိုးသားသား တောင်းပန်ခြင်းကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
အမှားလုပ်လိုက်မိချိန် ပြန်တောင်းပန်တဲ့အခါ ခွင့်လွှတ်မှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့၊ ဒီကနေစပြီး customers နဲ့ပိုပြီး ရင်းနှီးနက်ရှိုင်းတဲ့ ပက်သက်မှုမျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သူတစ်ယောက်မှ အမှားနဲ့မကင်းတဲ့အတွက် သင်ဟာလည်းပဲ တောင်းပန်ခံရတဲ့အခြေအနေကို ရောက်ရှိခဲ့ရင်တော့၊ တစ်ဖက်လူအပေါ် အမျက်ဒေါသနဲ့မအော်မိခင် ပြန်စဥ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်…………။
ဒါအစစ်လား? ဂျပန်နိုင်ငံကလွဲပြီးအခြားမှာ ရှာဝယ်လို့မရနိုင်တဲ့နာရီ…. !!!